Iphika inkohlakalo yethenda imeya yaseKurhuleni
IPHIKA eyenkohlakalo ngethenda yamathoyilethi iMeya yaseKurhuleni uMnuz Mzwandile Masina, ethi ngeke isuke esikhundleni
ZANELE MTHETHWA | July 12, 2019
IMEYA kaMasipala waseKurhuleni uMnuz Mzwandile Masina, ishaya phansi ngonyawo ukuthi ngeke yehle esikhundleni emuva kwezinsolo zenkohlakalo yethenda yamathoyilethi.
UMasina obekhuluma nesiteshi somsakazo iSAfm izolo, uyazichitha izinsolo zethenda kaR1.9bn. UMasina usola ukuthi kunetulo lokumsusa esikhundleni. Uthe kunemiyalezo esabalele ezinkundleni zokuxhumana kuthiwa kumele asule. Uveze ukuthi akukho okungahambanga kahle ngesikhathi kukhishwa le thenda. Uthe kwayona ithenda yakhishwa engakangeni esikhundeni ngo-Agasti 2016.
“UMasipala wethu ungomunye wabenza kahle kakhulu ngokusebenza nokuyisa intuthuko emphakathini. Angisatshiswa wukuthi abantu bathini futhi ngeke ngisuke esikhundleni. Alikho iphutha elenzekile kodwa kwalandelwa yonke imigomo ngokukhishwa kwethenda,” kuchaza uMasina.
Uthe uMasipala wakhe usukhiphe amathoyilethi angu-39 000 kubahlali basemjondolo, okuyisibalo esinyuke kakhulu sisuka ku-9 000 ngo-2014.
Ecacisa esitatimendeni asifundele abezindaba esithangamini sangoLwesithathu eGermiston Civic Centre, uMasina uthe wuR872 osetshenziswe kwithenda yamathoyitheli. Uthe phezu kwenkampani eyayiqashelwe ukwenza umsebenzi ngo-2014, baphinde baqasha abanye osonkontileka abangu-16.
Kwenzeka lokhu nje kumiswe uMnuz Joe Mojapelo obeyisikhulu esiphezulu kulo Masipala. Uthe uMojapelo umiswe emuva kombiko weSpecial Investigating Unit (SIU), esolwa ngenkohlakalo. UMasina uthe uMojapelo kumele avele phambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe, aziphendulele kulezi zinsolo zenkohlakalo. Ephawula ngalezi zinsolo uMajapelo, uthe imeya inephutha ngokuthi kunombiko omsola ngenkohlakalo. Ekhuluma emsakazweni uMojapelo uthe unobufakazi bokuthi awukho umbiko oshiwo yimeya.
“Bengivele ngazi ukuthi awukho lo mbiko kodwa bekufanele ngenze ucwaningo ukuqinisekisa. Ngaxoshwa ngoMeyi 2 ngaphambi kokhetho, nakho engingeke ngiphawule kakhulu ngakho ngoba angiyena usopolitiki. Ngaxhumana neSIU ukubuza ngombiko ngathola ukuthi awukho. Ngiwumuntu wenkonzo, izindaba ezifana nalezi zicekela phansi isithunzi sami emphakathi,” kusho uMojapelo. Akacacisanga ukuthi uzovela yini ekomitini lokuqondiswa ubugwegwe njengokusho kwemeya.